I-infrared cooktop FAQ - iZhongshan Amor Electrical Appliance Co., Ltd.
Uyini Umehluko Phakathi Kwe-Infrared And Induction Cooktops
Kungenzeka ukuthi udidekile ngokuthi yini umehluko phakathi kwama-cooktops we-infrared and induction…. Zombili lezi zinketho sekunesikhathi zikhona, ngakho-ke ukusiza ukususa noma yikuphi ukudideka, ake sibheke futhi sixoxe nge-infrared hot plate vs induction hot plate nokuthi zombili izindlela zokupheka zisebenza kanjani. Sizoxoxa ngokuthi kungani ukukhetha nokusebenzisa ukushisa kwe-infrared kuyindlela engcono futhi engabizi kakhulu. Futhi sizoxoxa ngezinzuzo zokupheka kwe-infrared. Uyathanda ukubona ama-ovens e-infrared athandwa kakhulu?
Kuyini Ukupheka Kwe-Infrared?
Ukupheka kwe-infrared kuyindlela ezuzisayo yokupheka ukudla okunempilo nokugcina izakhamzimba.
Ukushisa kwe-infrared kuyinto
Shesha ukupheka iningi lokudla- 3 x ngokushesha kunezindlela zendabuko
Ayikhiqizi ukushisa futhi igcina ikhishi lakho lipholile
Kupheka ukudla kwakho ngokulinganayo, hhayi ezindaweni ezishisayo noma ezibandayo
Igcina umswakama ophakeme ekudleni
Abapheki baphatheka kalula - Abapheki beBenchtop, oveni be-toaster nama-cooktops e-ceramic alungele
amakhishi, ama-RV, isikebhe, amakamelo okulala, amatende
Ama-BBQ ama-infrared mancane kakhulu ukusebenzisa futhi ashibhile ukuwasebenzisa
Bapheka Kanjani Abapheki Be-Infrared?
Ama-cooktops angaphansi kwe-infrared enziwe ngezibani zokushisa ze-quartz esitsheni sensimbi esivikelwe ukugqwala. Izibani zivame ukuzungezwa ngamakhoyili akhanyayo ukukhipha ngisho nokushisa okukhazimulayo. Lokhu kushisa okukhazimulayo kudlulisela ukushisa okuqondile kwe-infrared ebhodweni. Uzothola ama-cooktops e-infrared anokusebenza kahle kwamandla amakhulu kunamakhoyili kagesi aqinile ngokuphindwe kathathu ngokusebenza kahle. Inzuzo yabapheki be-infrared ngaphezu kwabapheki bokungeniswa: kungasetshenziswa noma yiluphi uhlobo lwamabhodwe namapani. Ngama-cooktops wokungeniswa, udinga i-cookware ekhethekile.
UBill Best wasungula isibhengezo sokuqala sikagesi esisebenza ngegesi ekuqaleni kwawo-1960. UBill wayengumsunguli we-Thermal Engineering Corporation futhi unelungelo lobunikazi lokushisa nge-infrared. Yaqale yasetshenziswa emafemini nasezimbonini ezinjengezitshalo zokukhiqiza amathayi namahhavini amakhulu asetshenziselwa ukomisa upende wezimoto ngokushesha.
Ngawo-1980, i-ceramic infrared grill yayisungulwe nguBill Best. Ngenkathi engeza ukwakheka kwakhe okokushisa kwe-infrared infrared ku-barbecue grate ayenzile, wathola ukushisa kwe-infrared ukudla okuphekwe ngokushesha futhi wagcina amazinga aphezulu okuswakama.
Ngabe i-Infrared Grill isebenza kanjani?
Ukushisa kwe-infrared bekulokhu kukhona. Ovini be-infrared bathola igama labo ezintweni zokushisa ezingaphansi kwe-infrared ezikhona kumgogodla womhlangano wabo wokushisa. Lezi zinto zokushisa zakha ukushisa okukhazimulayo okudlulisela ekudleni.
Manje kumalahle akho avamile amalahle noma igesi, i-grill iyashiswa ngokushisa amalahle noma igesi ebese ishisa ukudla isebenzisa umoya. Ama-grill infrared asebenza ngokuhlukile. Basebenzisa izinto zikagesi noma zegesi ukushisa indawo ebese ikhipha amaza e-infrared ngqo ekudleni okusepuletini, esitsheni noma ku-grill.
Kuyini Ukupheka Okungenayo?
Ukupheka Induction kuyindlela entsha yokushisa ukudla. Ama-cooktops wokungenisa asebenzisa ama-electromagnet ngokungafani nokuqhutshwa okushisayo ukushisa ibhodwe. Lawa ma-cooktops awasebenzisi noma yiziphi izinto zokushisa ukudlulisa ukushisa kepha ngqo ashise umkhumbi ngensimu ye-electromagnetic ngaphansi kwendawo yokupheka yengilazi. Inkambu ye-electromagnetic idlulisela okukhona njengamanje kuma-cookware kazibuthe, okudala ukuthi kushise okungaba yimbiza noma ipani yakho.
Inzuzo yalokhu ukufika emazingeni okushisa aphezulu ngokushesha okukhulu ngokulawula ukushisa okusheshayo. Ama-cooktops wokungeniswa anezinzuzo eziningi kumthengi. Enye yazo isipheki asishisi, sinciphisa amathuba okusha ekhishini.
Isebenza Kanjani Ukupheka Okungenayo?
Abapheki bokungeniswa benziwa ngezintambo zethusi ezibekwe ngaphansi komkhumbi wokupheka bese kuthi amandla kazibuthe ashintshanayo adluliswe ocingweni. Okwamanje kushintshana kumane kusho okulokhu kuguqula ukuqondiswa. Lesi sikhathi samanje sakha amandla kazibuthe aguquguqukayo azokhiqiza ukushisa ngokungaqondile.
Empeleni ungabeka isandla sakho phezu kwengilazi futhi ngeke uzwe lutho. Ungalokothi ubeke isandla sakho esisetshenziselwe ukupheka muva nje ngoba sizobe sishisa!
I-cookware elungele abapheki bokungeniswa yenziwa ngezinsimbi ze-ferromagnetic ezifana nensimbi yensimbi noma insimbi engagqwali. Ukunikeza ukuthi usebenzisa i-ferromagnetic disk, ithusi, ingilazi, i-aluminium, kanye namagnon, izinsimbi ezingenasici zingasetshenziswa.
Kungani Ukupheka Ngaphakathi Kungcono? I-infrared Hot Plate VS Induction
Abantu bavame ukubuza umbuzo "wepuleti eshisayo ye-infrared vs induction" uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kwamandla. Abapheki abasebenzisa ama-infrared basebenzisa amandla angaphansi kwe-1/3 kunanoma yiziphi ezinye izinhlobo zokupheka noma ama-grills. Ama-infrared burners ashisa ngokushesha okukhulu, akhiqiza amazinga okushisa aphezulu kune-grill noma umpheki wakho ojwayelekile. Abanye abapheki be-infrared bayakwazi ukufinyelela kuma-980 degrees Celsius ngemizuzwana engama-30 futhi bangaqeda ukupheka inyama yakho ngemizuzu emibili. Lokho kushesha ngokweqile.
Ama-infrared cookers nama-BBQ grills kulula ukuwahlanza. Cabanga ngakho konke ukungcola okokugcina usebenzisa i-burner grill noma i-grill charcoal…. Wonke ama-splatters obekufanele ahlanzwe…. Izakhi eziboshwe nge-ceramic ku-BBQ ye-infrared zidinga ukusulwa phansi futhi isitsha sokupheka kwebhentshi singena ku-daishisher.
Izinzuzo Zokupheka Okusobala?
Ukupheka kwe-infrared kuqinisekisa ukuthi ukushisa kusatshalaliswa ngokulinganayo kuyo yonke indawo yokupheka. Ukushisa okukhazimulayo kungena ngokulinganayo ekudleni kwakho futhi kuqinisekise ukuthi okuqukethwe umswakama kuhlala kuphezulu.
Amazinga okushisa aphansi
Izipheki ezingafakwa i-infrared zishisa ngokushesha okukhulu. Siphakamisa ukuthi ubuke ukudla eduze futhi wehlise ukushisa lapho kudingeka. Kufanele ukhethe umpheki we-infrared onamasethingi okushisa ahlukahlukene.
Ama-infrared cookers nama-grill asebenzisa cishe amaphesenti angama-30 kaphethiloli omncane kunegridi yakho kagesi, igesi noma yamalahle. Lokhu konga imali bese kusiza imvelo. Thola ukuthi yimaphi ama-grills ama-infrared aziwa kakhulu lapha
Ngenxa yokuthi ama-grilla infrared ashisa ngokushesha kakhulu, enza ukupheka ngokushesha. Ungosa i-barbeque, inyama eyosiwe, upheke ukudla futhi wenze konke okufunayo cishe izikhathi eziphindwe kathathu kunompheki ojwayelekile.
Bashesha Kangakanani Abapheki Abangafuni Ukulawulwa?
Abapheki abangahlaseli bangakhuphukela ngaphezu kuka-800 degrees Celsius ngemizuzwana engama-30. Bashesha kanjalo. Ngokuya ngemodeli nohlobo lwayo, ungathola amamodeli ahamba kancane. Qaphela ukuthi iphuzu lonke lokudlulisa ukushisa nge-infrared kungenxa yejubane.
Ama-burners kagesi namalahle okupheka amalahle azodinga ukushisa ukuthi kuhanjiswe esitsheni sakho sokupheka bese ulinda ukuthi umkhumbi ushise ngaphambi kokuba izinga lokushisa lenyuke. Izindawo ezinamacala zisebenzisa ukushisa ezitsheni zakho zokupheka ngokushesha okukhulu futhi zivikela nokudla kwakho ekulimaleni. Cabanga ukupheka i-barbeque ngemizuzu eyi-10 nje futhi ube nakho okumnandi njengakuqala. Ungahle uthande nokubheka ama-grills wamalahle nawo
Ingabe Uyayidinga Imishini Ekhethekile?
Awudingi i-cookware ekhethekile njengoba sishilo. Njengabapheki abajwayelekile ungathola amathani wezesekeli ongase uzidinge nokho… .. Njengezitsha ezikhethekile eziwugqinsi zompheki wakho.
Isiphetho Sokuthi Uyini Umehluko Phakathi Kwe-Infrared And Induction Cooktops
Ukupheka kwe-infrared nokupheka kwe-Induction zombili izindlela ezinhle zokupheka. I-infrared kepha inikeza izinzuzo eziningi njengoba ukudla kwakho kuphekwa ngokushesha ngaphandle kokufaka ukudla kwakho ngomlotha noma ngentuthu. Ama-infrared cookers nawo alungele imvelo - asisiza ukuthi sisebenzise uphethiloli omncane wezinsalela ukukhiqiza ukushisa.